AT & T inonzi inodonhedza zuva rekuburitsa iyo iPhone 7 | IPhone nhau
AT & T Zvinofungidzirwa Kuburitsa iPhone 7 Kuburitswa Zuva
Iwe unonzwa senge tenga iPhone 7? Apple yanga ichiratidzira smartphone yayo kwemakore kutanga kwaGunyana, saka tinogona kutaura kuti tave nemavhiki matatu kubva panguva iyo Phill Shiller aburitsa zvese nezveiyo iPhone 7. Dzimwe runyerekupe dzinoti ichi chirevo chikuru chichaitika wa7 Gunyana. Gunyana uye kuti maatemu ese ari maviri aizosvika muzvitoro musi wa16 asi, sekureva kwekudonha kunofungidzirwa kubva kuAt&TVia 9t05mac), tinogona kutenga imwe yePhones nyowani pazuva September 23.
Runyerekupe zvakare runovimbisa kuti zvichave zvichigoneka chengetedza iyo iPhone kubva Chishanu, Gunyana 9, saka hurukuro inokosha inofanira kunge iri mazuva mashoma zvisati zvaitika. Ini pachangu, handigone kutenda kuti Apple inopemberera yakakosha neChitatu, asi ini ndinofarira kufunga kuti mvumo yepamutemo yeiyo iPhone 7 ichaitika muna Gunyana 5 kana 6.
Iyo iPhone 7 icharova muzvitoro munaGunyana 23
Ehe, ini ndinofunga zvakakosha kuti urangarire kuti Apple haiwanzo kuvhura yayo nyowani iPhone pasirese, kana zvisiri izvo zvinoita saizvozvo mukutenderera. Mukutanga zvinowanzoitika inowanikwa muUnited States nedzimwe nyika iyo Tim Cook nekambani inoona yakakosha kune iPhone kutengesa, senge China kana, yatove muEurope, France, Germany neGreat Britain.
Nyika kubva kweseva painonyora, España Chave chiri muboka renyika dzeround yechipiri kwemakore akati wandei, saka zvinogona kunge kuti iyo iPhone 7 ichasvika munyika medu, tinotarisira, vhiki dzinoverengeka gare gare, ndiko kuti, muna Gumiguru 7.
Nezve mutengo, zvirinani kuti usataure chero chinhu, nekuti inenge isiri nguva yekutanga kuti titaure nezvemutengo usiri iwo wekupedzisira watinoona muApple Chitoro. Ehezve, zvirinani isu tinenge tichinyatso kuziva kuti hakuzove nePro modhi, saka mune zvakaipisisa kesi, iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichave chete mashoma maEuro anodhura.
Iwe wave kutoda kutenga iyo iPhone 7?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » AT & T Zvinofungidzirwa Kuburitsa iPhone 7 Kuburitswa Zuva
Ndatenda Pablo, ndanga ndazviona pa9to5mac, asi ini ndinogara ndichida kuiverenga muchiSpanish, uyezve, haumbofi wakakundikana isu, ndinofunga ndiwe mumwe weanokurumidza mumabloggi eSpain kuti tigare tichikurukura nezvazvino kubva kuApple .
Kumubvunzo wako wekupedzisira, ndinofunga ndichamirira iyo iPhone ya2017 uye ini ndichatora wachi iyo ichazopawo imwe nyowani, nekuti ini handisati ndabata imwe uye zvine chokwadi chekuva sarudzo yakanaka pamwe neyangu iPhone 6 iyo ichagara kwenguva yakati rebei! Unofungei?
Pufffff… Inonakidza silux sarudzo, iwe wakandipa chimwe chinhu chekufunga nezvacho!
Inonakidza silux sarudzo.
Mhoroi, silux. Iyi sarudzo, hongu. Muchokwadi, icho chinhu chandave ndichiongorora kusvika nguva pfupi yadarika, kuti shamwari ine Huawei "chimwe chinhu" chiri kumupa matambudziko uye, achitaura achitaura, zvirokwazvo anogona kumutengesa iyo iPhone 6s nemutengo wakanaka (kwandiri xD) , iyo inozonamirwa kadhi rechipo randakachengeta uye rinozoita iyo yechi7 (kana ndikafunga kuitenga) ibude chaizvo mumutengo. Ini ndinotaura izvi nekuti ini ndinofarirawo zvikuru Apple Watch uye ndinodawo kumirira iyo nyowani.
Zvakanaka, zano rinogona kushanda zvakanaka, zvirokwazvo wachi yeapuro, kunyanya mune ichave iri mukuita, ichave yevazhinji izvo chizvarwa chekutanga chaifanira kunge chiri, uye sezvakaitika nefoni, ichi chizvarwa chechipiri chichava chakaringana chigadzirwa chakakura uye yakanaka yekutenga sarudzo.! Ndiri kutarisira kumberi!
Pufff, nditore, ndiri "muropa" kukwira bhasikoro rangu kupfuura nakare kose. Kudzora iyo iPhone pandinoiisa pane yekubata nenzira yakasununguka, moyo wekutarisa, nezvimwe, kana ... Kana ndiri akatendeseka, ndinofunga handina kumbomirira kwenguva yakareba kudaro. Ndosaka ndanga ndichikuudza nezvese yangu yekutamba, nekuti ndinofunga kuti dai ndaifanira kusarudza, ini ndaizosarudza wachi 🙂
Duo, iyo vhidhiyo yekufona app yakagadzirwa neGoogle inouya kuIOS
Maitiro ekugadzirisa dambudziko rekushanda kweiyo PayPal app mune in terminal ine jailbreak